Nhau - PVC yekuvhara madziro inogona kuve yakanaka kwazvo!
Kubva panguva dzekare, kutsvaga kwevanhu kwe "runako" hakuna kumira. Pakangotanga kupera kweMiddle Ages kusvika pakutanga kwezana ramakore rechi18, machinda eSweden nevatengesi vakapfuma vakatanga kushandisa zvidzitiro zvemadziro sekushongedza kwemukati. Iwo masitayera aive cashmere akafukidza madziro, Gobelin madziro akafukidza, uye kuvaka. Leather madziro akafukidza, velvet satin madziro akafukidza, nezvimwewo, kuratidza kwavo kuzivikanwa. Gare gare, zvakafananidzirwa zvakafukidzwa pamadziro (machira ekotoni) zvakave zvakakurumbira pakati pevanhuwo zvavo uye zvakava hasha dzese.
Mazuva ano, nekuenderera mberi kuri kufambira mberi kweyekugadzira tekinoroji, mhando dzepepuru yekuvhara madziro inoramba ichiwedzera. Iine murazvo unodzora murwi, antibacterial, mildew, isina mvura uye antifouling mashandiro, PVC yakafukidza madziro anowirirana nezvinodiwa nenzvimbo dzakasiyana siyana uye kusangana nezvinodiwa nevanhu vemazuva ano. , iyo isingaenzaniswi nezvimwe zvemadziro ekushongedza zvinhu.
Nekudaro, vamwe vanhu vachiseka kuti PVC inovhara madziro haigone kuve "yefashoni fashoni" yemadziro, nekuti ruzhinji rwevanhu rwekufunga nezvePVC yekuvhara madziro ndiko kushanda kwayo.
1. Iyo "yakasarudzika" yePVC yakavhara madziro
Iwo matatu-mativi embossing uye akakwirira-ekuzadza mavara anogadzirwa nePVC madziro akafukidza haana kufananidzwa neyechinyakare yakarukwa machira ekuvhara machira uye mapikicha. Mafukidziro ePVV emadziro anogona kusanganiswa neakanaka-mativi matatu mapatani uye ane mavara mapatani ekugadzira nzvimbo yakati sandara. Izvo zvinoonekwa izvo zvakafukidzirwa nemadziro hazvigone kusvika
Mafukidziro ePVV emadziro anomonerwa nema rollers, ayo anogona kusanganisa mapatani akasiyana, akasiyana zvinhu, uye akasiyana mavara. Zvichienzaniswa nechero-zvinhu zvemadziro zvakafukidza izvo zvinongoita shanduko mune mapatani, PVC yakafukidza madziro anogona kuburitsa akapfuma maumbirwo uye dhizaini, saka mazhinji epamusoro-magumo mahotera achasarudza PVC madziro ekufukidzira semadziro ekushongedza zvinhu.
2.PVC yakafukidza madziro inogona "kuchengeta huduku nekusingaperi"
Iko kunzwa kwekutanga kwakakosha, asi zvakanyanya kukosha ndeyekuti ungachengetedza sei "runako" urwu. Munguva iyo mushure mekuvakwa kwapera, akawanda akafukidza madziro anozove nematambudziko senge kusakara kwezvinhu nekuchinja. Zvichienzaniswa nemamwe marudzi emadziro akafukidzwa, PVC madziro akafukidzwa, akaumbanidzwa PVC makarenda mafirimu anogona zvirinani kuchengetedza "hudiki", kunyangwe mushure menguva yakareba yekushandisa, ivo vachiri nemavara epakutanga mavara uye yakajeka kupenya. Iyo zvakare ine zvakanakira kusava nemvura, antifouling, uye kuchenesa mvura
3. PVC yekuvhara madziro inokodzera zvimwe zviitiko
Mahotera mazhinji, nzvimbo dzevaraidzo, maresitorendi, maresitorendi uye zvivakwa zvehofisi zvinonyanya kusarudza kushandisa PVC madziro emadziro ekushongedza kwavo kwemukati emadziro. Vamwe vanogadzira vanototengesa dzimba dzekumusoro-pekupedzisira, zvivakwa zvemafurati, uye zvivakwa zvemahofisi mushure mekushongedzwa nemadziro ePVC.